Idatha eyi-6 eyimfuneko yokuthatha isikhundla kwimarike yemasheya | Ezezimali
Alithandabuzeki elokuba umsebenzi wokuthenga izabelo kwiimarike ze-equity ufuna umzamo omncinci kwicala labatyali mali abancinci nabaphakathi. Le yintsebenzo engafanelanga ukuba ishiywe ekuphuculeni kuba imali eninzi isemngciphekweni kolu hlobo lokuthengisa ngesitokhwe. Nakuphi na ukubala okungalunganga kunokwenza umohluko kwii-euro ezininzi kunye nenyani yokuba utyando lunenzuzo okanye hayi. Ngaphandle kolunye uthotho lokuqwalaselwa kobuchwephesha okuya kuba ngumxholo welinye inqaku.
Elinye lawona maxesha abalulekileyo kwizenzo zabatyalomali lixesha lokuthenga izabelo. Kubaluleke kakhulu ukuhlengahlengisa amaxabiso kuba inzuzo yexesha elizayo yokutshintshiselana ngesitokhwe iya kuxhomekeka kuyo. Kwelinye icala, kuya kufuneka wazi ukuba ngawaphi amacandelo oza kuthenga kuwo, kuba umahluko phakathi kwawo uhlala uhambelana kakhulu. Umahluko wamaxabiso ukuya kuthi ga kwi-3% kwiseshoni enye yorhwebo. Akukho zimpazamo zinokwenziwa njengoko baya kuhlawula kakhulu ekugqibeleni.
Ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi kwiimarike ze-equity ngendlela eyonelisayo kwiminqweno yakho, siza kukunika izitshixo zeeparameter omele uzibekele zona ukusukela ngoku. Baza kukunceda ukuba unyuse iinketho njengoko ungenakucinga kwasekuqaleni. Abasayi kusekelwa kwicandelo elinye lolwazi kodwa kwinani elithile kunye nolwahlukileyo, njengoko uya kuba nakho ukubona apha ngezantsi. Ngayiphi na imeko, sisikhokelo esincinci sokwandisa utyalomali ngeyona ndlela ichanekileyo.
1 Idatha: ixabiso lesabelo
2 Khangela imeko yangasemva
3 Icandelo elingelakhe
4 Imeko Inkampani
5 Phila umzuzu woluhlu
6 Imbali yeekowuti zakho
Idatha: ixabiso lesabelo
Kuya kufuneka kube yinto yokuqala ekufuneka ujonge kuyo, ukubona ukuba ixabiso lesabelo lixabiso eliphantsi okanye liyabiza, kuyakufuneka ukuhlalutya izibonelelo ezinayo inkampani. Kuya kufuneka uthumele amanyathelo akho kwiimarike ze-equity usinge kwiinkampani ezingathathelwa ntweni kulungelelwaniso lwamaxabiso azo. Asizizo zonke ezikwimeko efanayo, njengoko kusengqiqweni ukucinga, kwaye ngenxa yesi sizathu le nyathelo kutyalo mali kufuneka icingisiswe kakhulu. Ngayiphi na imeko, akufuneki uthenge ukuthenga kuba esi sicwangciso silula sinokukukhokelela kwiimeko ezingafunekiyo kwicala lakho.
Kwelinye icala, inyani yokuba inkampani ithengisa ngemali encinci ayithethi ukuba ayibizi. Akukho kuncinci, ukuba akunjalo ngokuchaseneyo oko kuthetha ukuba kukuxabisa okuphawulwa ziimarike zezemali. Ngale ndlela, awungekhe ulibale ukuba izabelo kwimarike yemasheya ziphathwa njengayo nayiphi na enye iasethi yezemali. Oko kukuthi, ngumthetho wonikezelo kunye nemfuno kwaye le yinto enzima kakhulu ukuba uyixabise kwiimarike zezabelo. Kuzo zonke iimeko, kwaye ukuba kunokwenzeka, kufuneka ujongane namathuba oshishino ahlala evela kolu hlobo lweemarike zezemali.
Khangela imeko yangasemva
Enye into omele uyiphande ukuze uphuhlise iphothifoliyo yakho elandelayo yotyalo-mali yindlela yexabiso lemarike yemasheya. Ngengqondo yokuba kufuneka ukhethe iintshukumo ezonyusayo. Ukuba kunje, akukho mathandabuzo okuba uya kuba nethuba elincinci lokwenza iimpazamo ukusukela ngoku. Akumangalisi ukuba, lo mzuzu ukhuthaza amaxabiso ukuba aqhubeke nokunyuka kwiiseshoni ezilandelayo. Isicwangciso esisisiseko sokutyala imali kuyo nayiphi na iprofayile kweli lizwe linzima lemali.
Enye yezinto ezilungileyo malunga nokusetyenziswa kwale nkqubo kutyalo-mali kukuba iindlela eziya phezulu zibonakala ngokulula. Banikezela ngokungathandabuzekiyo ngokusebenzisa umzobo olula onokungenisa kuwo nakweyiphi na imithombo yeendaba ekhethekileyo kwicandelo lotyalo-mali kwaye ngakumbi kwimarike yezemali. Nangona kuya kufuneka ucinge ukuba kukho iindlela eziya phezulu ngokuxhomekeke kwimiqathango yesigxina. Oko kukuthi, mfutshane, phakathi kunye nexesha elide kwaye kulapho kuya kufuneka uchaze eyona nto ufuna ukuyenza notyalo-mali lwakho. Ngale ndlela, kubaluleke kakhulu ukuba ucacise iprofayile yakho njengomtyali mali: olondolozayo, ophakathi okanye onolunya.
Okungabalulekanga kangako kukwazi icandelo apho uza kutyala khona imali yakho ukusukela ngoku. Kuya kuxhomekeka kwinqanaba elithile kwinzuzo yokusebenza kuba umahluko phakathi kwabo uhlala umkhulu kakhulu. Kunokubakho ukujikeleza, amacandelo okuzikhusela okanye ukuphuhlisa ukusebenza kwendalo yokuqikelela. Kuxhomekeka kwiminqweno yakho, kuya kufuneka ukhethe enye okanye enye kuba isimilo sabo sahlukile ngokuqina okukhulu. Kuqhelekile ukuba ngelixa amaxabiso ecandelo lebhanki enyuka, lawo ombane aya ezantsi kungenjalo. Ngesi sizathu, ukukhangela imarike efanelekileyo yesitokhwe kunokukunceda ukuba usebenze kakuhle ngempumelelo enkulu.
Ngelixa ngokuchaseneyo, ungalibali phantsi kwayo nayiphi na into ukuba ayingawo onke amacandelo esitokhwe ahlala phantsi kwendlela efanayo. Kungenxa yokuba ayifani njalo, njengoko kubonakala kuzo zonke iiseshoni zokurhweba, kokubini kuthengiso lwesitokhwe sikazwelonke nangaphandle kwemida yethu. Ekupheleni kosuku, yintoni malunga nokufumana isigqibo oza kusenza kwangoko ukusukela ngoku. Into ekunzima ukuyiphumeza ngamanye amaxesha, njengoko abatyali mali abanamava ngakumbi kwiimarike zezabelo. Akumangalisi ukuba kubekho umahluko kwi-euro ezininzi ngezi zenzo.
Yenye yeeparitha ezincinci ezaziwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngengqondo yokuba bahlala bethenga izabelo ngaphandle kokwazi enye yezona datha zibalulekileyo ukukhulisa ipotifoliyo yotyalo-mali ethe kratya okanye incinci. Ngale ndlela, ubuqhetseba obuncinci bulele kwinto yokujolisa kwiinkampani ezinamatyala amancinci kakhulu. Iya kuba yipasipoti ukuba indlela oziphethe ngayo ibengcono kunezinye. Kananjalo isikhundla sayo phambi kokhuphiswano kwaye inokuthi ivelise ukuba isikhundla sayo sinenzuzo engaphezulu okanye encinci xa kuthelekiswa nezinye iinkampani zeli candelo.
Kwelinye icala, kufuneka sinike ingqalelo kuzo zonke iikota apho iziphumo zeshishini zipapashwa khona kuba zihlala zinika umkhondo ongaqhelekanga malunga nento ekufuneka siyenzile. Ngelixa sithatha izikhundla okanye ngokuchaseneyo ekubeni nemali epheleleyo njengefomyula yokugcina imali yethu ekhoyo ukwenza utyalomali. Sisicwangciso sotyalo-mali esiluncedo kakhulu ekuphumezeni imigca yethu yokusebenza. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Le yinto ekufuneka ungayilibalanga ukuze ungenzi iimpazamo ngala maxesha achanekileyo.
Phila umzuzu woluhlu
Ewe kunjalo, esinye sezicwangciso esiza kusetyenziswa kukukhetha isitokhwe esinexesha elifanelekileyo lokuqeshwa. Zizo ezo zibizwa ngokuba ngamaxabiso ashushu kwiimarike ze-equity kwaye zinokukwenza imali eninzi ngeentsuku ezimbalwa. Oko kukuthi, bakumaxesha afanelekileyo okuba bathengwe kuba uxinzelelo lokuthenga lunamandla kakhulu kwaye lungaphezulu komthengisi. Yinkqubo elula kakhulu ukuyisebenzisa ukuba ulandela naziphi na iindlela zonxibelelwano apho uhlalutyo lobuchwephesha luxabiseke ngaphezulu kwesiseko. Oko kukuthi, ekupheleni kosuku, yintoni ebandakanyekayo ekusebenzeni kunye nexesha elikhawulezileyo lokusisigxina okanye ukuthelekelela kwendalo.
Enye into ekufuneka uyithathele ingqalelo ukuvavanya esi sicwangciso sikhethekileyo kukuba ezi ntshukumo zimfutshane kakhulu. Kwaye ngenxa yoko unokufika emva kwexesha ekwenzeni imisebenzi yakho kwintengiso yesitokhwe ibe yinzuzo. Hayi ngelize, ngowona mngcipheko uphambili wesicelo sayo kuba kufuneka ungxame kakhulu ukuvula izikhundla kwixabiso elishushu leemarike zezabelo. Apho kuqheleke kakhulu ukuba unokwenza impazamo engaqhelekanga ethintela ukufikelela kwiinjongo zakho kwangoko. Ke ngoko, ukuba awunakukwazi ukungena emotweni ngexesha elifanelekileyo, kuya kuba ngcono ukuyeka ukusebenza.
Imbali yeekowuti zakho
Okokugqibela, kuluncedo kakhulu ukujonga imbali yeekowuti zabo kuba baya kunika ulwazi olungaphezulu kwesinye malunga nokuziphatha kwenkampani edwelisiweyo ngexesha elithile. Kuya kufuneka ubeneembali zento oyenzileyo kwixesha elidlulileyo ukuze uchaze iintshukumo ezizayo kwiimarike zezemali. Ngale ndlela, inokukunika ulwazi oludingayo ukuze wazi ukuba isitokhwe, umzekelo, sikwisimo se ukunyuka simahla okanye ukuwa. Kubalulekile ukuvula njengezikhundla ezikufutshane kwiimarike ze-equity.
Njengamanye amanani athiwe thaca kuhlalutyo lobuchwephesha kwistokhwe kwaye ngokungathandabuzekiyo banokukunceda ujonge utyalomali ngeyona ndlela ichanekileyo. Ngaphandle kolunye uthotho lokuqwalaselwa kwendalo eyahlukileyo kakhulu, njengoko uza kuqaphela ngalo mzuzu kanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Idatha eyi-6 eyimfuneko yokuthatha isikhundla kwimarike yemasheya